Deg Deg Daawo Sawiro:-Wararkii Ugu Danbeeyay Xaalada Baydhabo – KHAATUMO NEWS
Deg Deg Daawo Sawiro:-Wararkii Ugu Danbeeyay Xaalada Baydhabo
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa weli cakiran ka dib markii barqanimadii maanta ay sii xoogeysteen bannaabaxyada rabshadaha wata ee lagu taageerayo Mukhtaar Roobow Cali ee ka socda maalintii labaad magaaladaasi.
Dad fara badan, ciidamo iyo maleeshiyo hubeysan oo taageersan wadaadka ayaa saaka mar kale isugu soo baxay magaalada, waxaana dhacay iska hor imaad ay ku lug lahaayeen ciidamada booliska ee magaaladaasi.
Dibed-baxayaasha oo u badan dhalinyaro ayaa bilaabay inay sawirrada Shiikh Mukhtaar Roobow ku dhejiyaan aargada magaalada ee afar-irdoodka, iyadoo wadooyinka lagu jaray dhagxaan, birro iyo taayero gubanaya oo magaalada u bedelay goob dagaal.
Qaar kale oo ka tirsan dadka dibed baxaya ayaa watay cod baahiyeyaal iyagoo ku dhawaaqaya ereyo ay ka dhan ah madaxweynaha Somalia laguna taageerayo.
Saaka ayey ahayd markii magaalada lagu dilay xildhibaan ka tirsan Baarlamaankla Koonfur Galbeed, waxayna xaaladu halis u tahay inay faraha ka baxdo maadaama dowladda Soomaaliya uu weli u xiran yahay Mukhtaar Roobow oo shalay qasab looga soo kaxeeyey Baydhabo, lamana oga sida ay noqon doonto xaalada saacadaha soo socda.
Previous Post: War Deg Deg Ah:Dawladda Somalia Xidhay La-taliyaha Guddoomiye Mursal
Next Post: Deg Deg:–Xiisad Cakiran Oo Ka Dhex Qaraxday Dalalka China iyo Cannada